Huawei kwadoro Huawei G9 na China, ọ bụ ezie n'okpuru aha ọzọ | Akụkọ akụrụngwa
Huawei nyere Huawei G9 iwu na China, ọ bụ ezie n'okpuru aha ọzọ
Ngwaọrụ nke Huawei, otu n'ime ndị ama ama ama ama na ngwa ahịa ekwentị ugbu a, na-aga n'ihu na-enweghị ike ịkọwapụta ọkwa ọhụrụ nke oke mma, yana atụmatụ pụtara ìhè yana ọnụahịa dị oke ọnụ maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ akpa. Taa China emeputa ka eze n'ihu na mba nke si malite Huawei Maimang 5, nke ga-abata na Europe n'okpuru aha Huawei G9.
Aha nke smartphone gosipụtara nwere ike iduhie anyị, mana Huawei amalitela Hhuawei Maimang 4 na China afọ gara aga, nke mere ka ọ bụrụ mmalite na Europe n'oge na-adịghị anya n'okpuru aha Huawei G8. N'ebe a, anyị na-agwa gị ozi niile ekpughere taa, na-eche maka onye nrụpụta iji kpọsaa G9 na Europe na ụbọchị ndị na-abịanụ.
3 Nhazi na ebe nchekwa
5 Onwe ya
The Huawei G7 na Huawei G8 ghọrọ abụọ nke Huawei kasị agaziri nke ọma mobile ngwaọrụ ekele maka nnukwu ihuenyo na ọ na-enye anyị, na o siri ike ọ bụla osisi, na nnukwu ike na n'elu ihe nile na a kpachapụ anya imewe, na-adakarị ọdụ nke ihe a na-akpọ elu dị elu karịa nke etiti etiti ha.
Na nke a Huawei G9 ntakịrị ihe nke otu na - eme ọzọ. Ihuenyo ahụ na-alaghachi na sentimita 5.5, nke a na-agbakwunye na anụ ahụ a nụchara anụcha, nke nwere ahịrị ndị dị nro na eriri ndị ejiri oke nkenke. Ihe nha nke Maimang 5 a 151.8 mm dị elu site na 75.7 mm n'obosara. Okpukpo bụ milimita 7.3 na ịdị arọ nke ọnụ ọgụgụ ahụ adịgide na gram 160.
N'adịghị ka oge ndị ọzọ, Huawei G9 a ga-enwe ụfọdụ akụkụ ya na ọbụlagodi na azụ anyị nwere ike ịchọpụta ntakịrị mpempe akwụkwọ.
Banyere ihuenyo, a Huawei G9 akuko na a Ngosipụta nke 5,5 nke nwere mkpebi HD zuru oke nke ntụpọ 401 kwa inch nke ahụ na-enye anyị nchebe 2.5D.
Anyị anaghị eche ihu na ihu igwe kachasị mma n'ahịa, mana enweghị obi abụọ ọ ga-abụ otu n'ime ihe kachasị mma anyị nwere ike ịchọta na ngwaọrụ nwere ọnụahịa nke ga-ada n'ahịa ma ọkachasị na ngwaọrụ nke a na-akpọ etiti .
Nhazi na ebe nchekwa
N'ime anyị na-ahụ a Qualcomm Snapdragon 625, nke oge a ga-akwado 3 ma ọ bụ 4 GB nke RAM. Ihe nhazi a nwere 8-core architecture na arụmọrụ ugboro ruo 2 GHz. Maka GPU, anyị na-ahụ Adreno 506. Ihe a niile pụtara na ike na arụmọrụ nke Huawei G9 ọhụrụ a bụ ihe ekwenyesiri ike. nke ọnụ.
Banyere nchekwa dị n'ime anyị na-achọta nsụgharị abụọ dị iche iche, otu n'ime 64 GB na 128 GB ọzọ. N'ọnọdụ abụọ anyị nwere ike ịgbasa nchekwa a site na kaadị microSD nke 128 GB.
Na Huawei Maimang 5 a, nke a ga - akpọgharị n'oge na-adịghị anya na Europe dị ka Huawei G9 na - agbakwunye igwefoto azụ nke na - 298 megapixel Sony IMX16 ihe mmetụta na nchọpụta nke oge, anya m isii na onyonyo onyonyo. Obi abụọ adịghị ya na àgwà nke igwefoto ndị a ọ dịghị onye na-enwe obi abụọ na ọ bụ na Sony metụtara, àgwà ikpeazụ nke ihe oyiyi ahụ mere ka ọ doro anya.
Otu n'ime nnukwu atụmatụ anyị ga - ahụ na Huawei ọhụrụ a bụ ya ike idekọ vidiyo na mkpebi 4K.
Banyere igwefoto dị n'ihu, anyị na-achọpụta na ọ na-ebunye ihe mmetụta 8 megapixel nke nwekwara oghere oghere nke f / 2.0. Huawei choro mgbe nile inye anyi ohere nke ime ihe zuru oke zuru oke, ma n'oge a, Huawei G9 agagh adi obere nke ga adi na Europe n'oge na adighi anya, ma obu anyi nwere olile anya.
Otu n'ime ike nke njedebe dị iche iche nke G-ezinụlọ nke ndị na-emepụta China bụ ikike nke batrị nyere. Site na Huawei G9 a, onye nrụpụta China chọrọ ime ka atụmatụ a ka mma, na-agbakwunye batrị 3.340 mAh.
N'oge a anyị amaghị nnwere onwe nke ọdụ a ga-enye anyị, mana ọ bụrụ na anyị ewere G7 na G8 dị ka ntụnye, anyị nwere ike iji ngwaọrụ ahụ n'enweghị nsogbu maka awa 48, nke na-akpali nnọọ mmasị.
Iji mechie esemokwu a, Huawei G9 na-etinye njikọ USB nke C na ngwa ngwa ngwa ngwa nke ga-enye anyị ohere ịchekwa ọnụ na ncha anya.
Huawei Maimang 5 ga-ada ahịa na China na July 21 dị ka ndị na-emepụta onwe ya kwadoro. Anyị nwere ike ịchọta ha n'ụdị abụọ dị iche iche, nke ga-enwe ọnụahịa ndị a;
Ntughari na 3 GB nke RAM; 360 dollar
Ntughari na 4 GB nke RAM; 389 dollar
Ugbu a iji hụ ya na Europe, ọ fọdụrụ naanị maka Huawei iji kwado aha mgbanwe na Huawei G9 ma kwupụta ya na eze, ihe nwere ike ime na ụbọchị ndị na-abịanụ.
Huawei emeela ya ọzọ ma jisie ike gosipụta ọnụ ọhụụ ọhụrụ zuru oke, na ụfọdụ ihe karịrị atụmatụ na-adọrọ mmasị, yana imepụta nke na-akpachapụ anya ma nụchaa ma karịa karịa ọnụahịa dị ala. N'oge a enweghi ụbọchị amata maka mbata ya na Europe, mana n'ime ụbọchị ole na ole ọ ga-amalite ịre ahịa na China, ee, n'okpuru aha ọzọ.
Onye ọ bụla na-ewe mbata nke a n'ezie Huawei Maimang 5 gaa n'ahịa Europe, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na aha Huawei G9, dị ka ọ dịlarị na ụdị ndị gara aga nke ụdị a. Echere na ọtụtụ ụbọchị ekwesịghị ịgafe maka onye nrụpụta China iji mee ka onye ọrụ ngwaọrụ a na Euripa, mana ugbu a, anyị ga-echere ịmara ya ma nwalee ya.
Kedu ihe ị chere gbasara atụmatụ, nkọwa na ọnụahịa nke Huawei G9 a?. Gwa anyi na oghere edere maka ịza ihe na post a ma obu site na otu netwọkụ ndi mmadu ebe anyi no na ebe anyi choro isoro gi kparita okwu a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Huawei nyere Huawei G9 iwu na China, ọ bụ ezie n'okpuru aha ọzọ
Ọkpụkpụ a robot nwere ike i imitateomi mmegharị ahụ
Ihe nzuzo 7 gbasara Pokémon Go nke ị maghị